Macluumaad ku saabsan waxyeellada sonkorta oo muddo dheer la qarinayay oo soo baxay – Kasmo Newspaper
Macluumaad ku saabsan waxyeellada sonkorta oo muddo dheer la qarinayay oo soo baxay
Updated - November 23, 2017 10:10 am GMT
London (Kasmo), Koox Cilmibaarayaal Maraykan ah ayaa kashifay in Shirkad Maraykan ah, muddo 50 sano ka badan, qarinaysay natiijooyinka Daraasad caddeynaysa xiriirka ka dhexeeya Sonkorta iyo xanuunka halbowlaha wadnaha (Cardiovascular Disease).
Sheekadaasna waxaa bogagga Wargayska “Plos Biology” ku soo bandhigaya Kooxda Saynisyahanka ah oo caddeynaya sida Shirkadda ISRF (International Sugar Research Foundation) u joojisay Cilmi-baaris natiijadeedu ka hor imanayso danaheeda ganacsi.
Cristin Kearns, Dorie Apollonio iyo Stanton Glantz oo ka wada tirsan Jaamacadda California oo baaray dokumenti 50 sano ka hor ahaa ayaa helay in Shirkaddu maalgalisay Cilmibaaris lagu sameeyay jiirka, si loo qiimeeyo waxyeellada sonkortu u leedahay caafimaadka wadnaha..
Markii natiijooyinku u muuqdeen kuwo sonkorta la xiriirinaya xanuunnada ku dhaca halbowlaha dhiigga wadnaha iyo kansarka kaadihaysta (Bladder), Shirkaddu waxay goosatay in cilmibaarista la soo afjaro, iyada oo aan natiijada la baahinin.
Baaritaan hore oo ay sameeyeen, isla Cilmibaarayaashani waxay muujinayaan sida Shirkadda ISRF u maalgalisay (si mar kasta qarsoodi ah) Daraasad sannadkii 1967kii hoos loogu dhigayo kaalinta sonkortu ka qaadanayso caafimaadka wadnaha.
Laakiin Daraasadan cusub, Kooxdu waxay soo xiganaysaa sannadkii xigay ee 1968kii oo Shirkaddu maalgalisay cilmibaaris lagu samaynayo jiirka oo magaceedu ahaa “Project 259”. Taas oo lagu cabbirayo nafaqada uu Jiirku ka heli karo, iyo waxyeellada xiidmihiisa, marka lagu quudiyo sonkor iyo budo lagu daray.
Cilmibaarista oo ay samaysay koox ka tirsan Jaamacadda Birmingham, waxay tilmaamaysay in bakteeriyaha xiidmuhu baabi’in karaan waxyeellada gurracan ee sonkortu ku yeelan karto caafimaadka halbowlaha dhiigga ee wadnaha.
Daraasaddan cusub, haddaba, wax kale ma ahan ee waxay hoosta ka xarriiqaysaa, sida doodda caalamiga ah ee hadda ka taagan, dabargoynta waxyeellada sonkorta, loo adkayn lahaa, iyada oo in ka badan 60 sano Warshadaha Sonkortu gacan-bidxayn ku hayeen.
Gacan-bidixaynta Cilmibaarista noocaan ah waxay, sida uu Glentz tilmaamayo, la mid tahay middii Warshadaha Tubaakada, dhaqanka noocaan ahna wuxuu muran galinayaa Daraasadaha Warshadaha Sonkortu maalgaliyaan, oo noqonaya xog ayan ku kalsoonaan Karin dowladuhu.